Wunderlist ga-akwụsị ịrụ ọrụ na Mee 6, 2020 | Gam akporosis
Microsoft ka kwuputara na ọ ga-akwụsị mmelite na ịkwado otu ngwa ọrụ kacha ochie na ahịa. Ana m ekwu maka Wunderlist, ngwa nke ga-akwụsị ịnweta mmelite na nkwado nke May 6, 2020.
Dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwuru na nkwupụta ebe ọ kọọrọ ụbọchị a, njedebe nke otu ngwa bụ mmalite ọhụrụ nke onye ọzọ: Ime, ngwa ntinye ihe de Microsoft, nke na-elekwasị anya mgbalị niile site na ụlọ ọrụ.
A mụrụ Wunderlist na 2010 dị ka ngwa desktọọpụ, obere oge tupu ya abanye na ngwaọrụ mkpanaka. Na 2015, Microsoft zụtara ụlọ ọrụ ahụ n'azụ nke a ngwa e kere na kemgbe ugbu a, ọtụtụ mmelite na oru ma na-enweghị na-agbakwunye ọhụrụ atụmatụ na-elekwasị anya na Iji Mee.
N’ụzọ a na-apụghị ịkọwa akọwa, Microsoft chọrọ idobe Wunderlist n’ime afọ 4 ikpeazụ a, mana oge eruola iwu Ndị ọrụ Wunderlist ka ịgbanwee gaa Ime. Microsoft na-atụ anya na interface ugbu a na-awa site Ime maara nke ọma iji rịọ ndị ọrụ nke ngwa a ugbu a.
Isi uru nke ime Mee na-enye anyị ma e jiri ya tụnyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa arụpụta nke anyị nwere na ahịa ekwentị bụ nke ya mwekota na ọrụ Microsoft ndị ọzọ dịka Outlook.
Na-akwaga data si Wunderlist ka Ime, ị chọrọ akaụntụ Microsoft. Ọ bụrụ na anyị ebughị n'uche iji mee, anyị nwere ike bupu data na zip faịlụ ka enwere ike itinye ya na ngwa oru ozo.
Ọ bụrụ na ị na-eji Wunderlist na ekwentị mkpanaaka gị, sporadically na ị bu n'obi ịkwụsị iji ya mgbe ọ kwụsịrị ịnweta nkwado, ị ga-enwe ike ịga n'ihu na-eme ya n'enweghị nsogbu. Mana ị ga-eburu n'uche na ngwa agaghịzi adị na Storelọ Ahịa Play, yabụ ọ bụrụ na ị megharịa ngwaọrụ gị, Gaghị enwe ike ịtinye ya ọzọ, belụsọ ma inwere akwụkwọ nke APK.
Ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, ị na-eji Wunderlist mgbe niile na ngwaọrụ dị iche iche, ihe ngwọta kasịnụ taa bụ Microsoft ime (n'efu na-azụghị ngwa na ngwa), ọ bụ ezie na ndị ọrụ Wunderlist na-ahụ ya ọchị ịbụ onye na-akpata nsogbu na-apụ n'anya ngwa a.
Microsoft Ime: Ndepụta & Ọrụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Wunderlist ga-akwụsị ịrụ ọrụ na Mee 6, 2020
Nwere ike ịmepụta agwa gị ugbu a na Black Desert Mobile tupu sava emepe echi